Christmas Sale | Shop.com.mm
ဒီဇင်ဘာလရဲ့ ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကို ရောက်ရှိလို့ပါပြီ။ ဒီလိုအချိန်မျိုးဆို ကိုယ်ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေကို ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်လေးတွေပေးဖို့ စဉ်းစားအကြံထုတ်ရပြီပေါ့။ ရှော့ပင်းမောလ်တွေမှာလည်း ဈေးဝယ်သူတွေနဲ့ အလုအယက်တိုးကြိတ်နေကြတာဆိုတော့ ကိုယ်လိုချင်တာလေး မရလိုက်မှာစိုးရိမ်နေလား? ဒါမှမဟုတ် မပြီးပြတ်သေးတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ အပြင်ထွက်ဈေးဝယ်ဖို့ အချိန်မရဖြစ်နေပြီလား? ဒီလိုကိစ္စလေးတွေအတွက်ကြောင့်နဲ့တော့ ကိုယ့်ရဲ့ ခရစ်စမတ်အားလပ်ရက်အပျော်လေးကို အပျောက်အပျက်ခံလို့ မဖြစ်ဘူးနော်။ အိမ် (သို့မဟုတ်) အလုပ်မှာ အွန်လိုင်းသုံးရင်းနဲ့ Shop.com.mm မှာ ဈေးဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ခရစ်စမတ်ဈေးဝယ်အစီအစဉ်က အချိန်ကုန်လူပမ်းသက်သာပြီး ခဏလေးနဲ့ပြီးမြောက်သွားမှာပါ။ ပြီးတော့ ဆန်တာဘိုးဘိုးကြီးရဲ့ အိတ်ထဲကထပ်တောင်များပြားစုံလင်တဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ဦးမှာပါ။ သင့်ရဲ့ အချိန်တွေ၊ ငွေတွေနဲ့ ဘာဝယ်ရမလဲ ဦးနှောက်ခြောက်အောင် စဉ်းစားရတာတွေကနေ သက်သာစေဖို့ Shop.com.mm ကကူညီပေးမှာပါ။
ဒီအချိန်ဆိုရင် ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်လေးတွေကို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လဲရတာ ပျော်စရာမို့ အားလပ်ရက်ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့ရာသီအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ Shop.com.mm မှာဆိုရင် သင့်ရဲ့ ဖေဖေမေမေတို့အတွက်သာမက ချစ်သူကောင်လေးကောင်မလေး များ၊လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေနဲ့ ကလေးတွေအတွက်ပါ လက်ဆောင်ပေးနိုင်မယ့် ပစ္စည်းလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အကြီးစားလျှော့ဈေးတွေ၊လက်ဆောင်တွေနဲ့ ပွဲတော်ကိုကျင်းပပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်း၊တက်ဘလက်၊ဖက်ရှင်၊လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊အိမ်သုံးပစ္စည်း၊ စာအုပ်၊စားသောက်ကုန်နဲ့ကလေးများအတွက် ပစ္စည်းတွေအစုံအလင်ကို အထူးသက်သာတဲ့လျှော့ဈေးများနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်အရောက်ပစ္စည်းပို့ဆောင်မှု၊၇ရက်အတွင်းပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်မှုနဲ့ ၁၀၀%စစ်မှန်စိတ်ချရတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ဝယ်ယူလိုက်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးနဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအရှိဆုံး အွန်လိုင်ရှော့ပင်ကြီးမှာ ခရစ်စမတ်ဈေးဝယ်ခရီး စတင်လိုက်ကြရအောင်နော်!